Ny tontolon'ny fanahy - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Mihevitra isika fa ny tontolontsika dia ara-batana, ara-materialy ary telo-refy. Mahazo izany isika amin'ny alàlan'ireo fahatsapana dimy mikasika ny fikasihana, ny fanandramana, ny fahitana, ny fofona ary ny fihainoana. Amin'ireo fahatsiarovan-tsaina sy ireo fitaovana ara-teknika izay nokasaintsika hanamafisana azy ireo dia afaka mandinika ny tontolo ara-batana isika ary mampiasa ny tombontsoany. Izy io no nitondra ny olombelona lavitra, ankehitriny. Ny zava-bita ara-tsiansa maoderina, ny zava-bitantsika teknolojia dia porofo fa mahatakatra ny tontolo ara-batana isika, manokatra azy ary manararaotra izany. Ny tontolon'ny fanahy - raha misy - dia tokony misy mihoatra ny haben'ny vatana. Tsy azo zahana sy azo refesina amin'ny alàlan'ny fahatsapana ara-batana. Tokony ho tontolo iray izay tsy hita maso amin'ny ankapobeny ny fisehoany, mahatsapa, maimbo tsiro, tsiro ary heno. Raha misy, dia tokony ho ivelan'ny niainan'ny olombelona mahazatra. Ka: misy ve izao tontolo izao?
Tany am-piandohana, fotoana tsy nitaky loatra, tsy nahasarika ny olona ny nino ireo hery tsy hita maso sy zavaboary goavambe. Nandeha an-tsaha tao amin'ny zaridaina ny goavambe sy ny mpihaza tao anaty ala, ny matoatoa tao amin'ny trano tezitra. Ny hazo rehetra, ny vatolampy ary ny tendrombohitra dia samy manana ny sainy. Ny sasany dia tsara sy vonon-kanampy, ny sasany maloto ratsy, ny sasany ratsy fanahy. Fantatry ny olombelona ny hery tsy hita maso ka tokony hitandrina izy ireo mba tsy handatsa na hanompa azy ireo. Saingy nitombo ny fahalalana ara-nofo momba an'izao tontolo izao, ary nasehon'ireo siantifika fa ny hery voajanahary no manapaka an'izao tontolo izao. Azo hazavaina ny zava-drehetra raha tsy mampiasa ny zava-mahatalanjona. Na izany na tsy izany, nino ireo mpahay siansa fa niray saina izany. Ankehitriny dia tsy tena azo antoka intsony ny sasany. Arakaraka ny nampivelaran'ny mpahay siansa ny fetran'ny fahalalana amin'ny lafiny rehetra dia nanjary hita fa tsy ny zava-drehetra no hazavaina amin'ny hery ara-batana sy ara-boajanahary.
Rehefa mifandray amin'ny tontolon'ny herinaratra isika, dia mifandraika amin'ny hery mahery, ary izy ireo dia tsy hoe tsara fanahy fotsiny. Ny kivy, ny haitraitra, eny fa na dia te hahafanta-javatra haingana dia afaka miditra amin'ny olana. Tsy tokony hionona amin'ny firenena ianao raha tsy misy mpitari-dalana tsara. Vola be no efa mivoaka eto mandraka androany. Ny sasany dia finoanoam-poana sy tsy misy dikany, ny sasany dia asan'ny mpahay siansa izay mampiasa ny fahatahorana ny gullible sy tsy manintona. Saingy misy koa olona maro tso-po sy manana heviny tsara izay manolotra antsika ho mpitarika amin'ny tontolon'ny fanahy.
Ny mpitari-dalana antsika dia tokony ho ny Baiboly. Io no fanambarana nataon'Andriamanitra tamin'ny olona. Ao anatin'izany dia lazainy amintsika izay tsy ho fantatsika na tsy azontsika tsara amin'ny saina dimy. Ity dia boky torolalana nomen'ny Mpamorona ho an'ny olombelona iray. Izany no antony ilana antoka sy azo itokisana ary "boky fitenenana" ho an'ny zavatra rehetra tokony ho fantatsika momba ny hery, ny hery ary ny fitaomana ivelan'ny fanandramana voajanahary.
Lahatsoratra avy amin'ny bokikely "Ny tontolon'ny fanahy"